यस्तो छ नेपालमा गर्भपतन सम्बन्धि फेरीएको कानूनी ब्यवस्था – Anurag Post
Home / अनुराग पोष्ट / यस्तो छ नेपालमा गर्भपतन सम्बन्धि फेरीएको कानूनी ब्यवस्था
Anurag Post July 20, 2019	अनुराग पोष्ट, स्वास्थ्य Leaveacomment 255 Views
काठमाडौ । गर्भपतन विश्वभरी नै अवैध कार्य हो । यसलाई विभिन्न कानून बनाएर बन्देज गरिएको छ । तर कतिपय अवस्था यस्तो आउँछ गर्भपतन नगरी अर्को विकल्प हुन्न । त्यस्तो विशेष अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउँनेगरी वि.सं. २०५९ सालमा नेपालमा कानूनी ब्यवस्था गरेको पाईन्छ । नेपालमा पनि केही विशेष अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाइने कानुनले व्यवस्था छ ।
गर्भपतन सम्बन्धी कानुनले बच्चा जन्माउने वा नजन्माउने निर्णय लिने अधिकार महिलालाई सुम्पिएको छ । गर्भपतनले कानुनी मान्यता नपाउँदासम्म महिलाहरु अनिच्छित गर्भ रहँदा पनि बच्चा जन्माउन बाध्य थिए । साथै धेरै महिलाहरुले लुकीछिपी असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा जटिलताहरु उत्पन्न भई कतिपय महिलाहरुको ज्यानै समेत जाने गरेको थियो ।
कानूनी रुपमै सुरक्षित गर्भपतन सेवा सर्वसुलभ गराई, मातृ मुत्युदर र स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम घटाउन मद्धत पुर्याएको छ ।
कस्तो अवस्थामा गर्भपतन गराएमा कानुनरुपमा सजाय हुन्छ
अशिक्षित र कानुनी ज्ञान नभएका २० प्रतिशत र आर्थिक अवस्था कम्जोर भएका २२ प्रतिश महलिाले असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् । एक सय गर्भवती महिलामध्ये ८ जनाले गर्भपतन गराउँछन् । कुल गर्भवतीमध्ये २५ प्रतिशत महिलाहरु चाहना विपरीत गर्भवती हुन्छन् । जनबोली बाट
Previous चेतावनी : पत्रपत्रिकामा राखेका खानेकुरा कहिल्लै नखानुहोस्, मसीमा हुन्छ यस्तो डरलाग्दो रसायन ?
Next चश्मा लगाउनेहरुलाई ठूलो झड्का : हुन्छ यस्तो डरलाग्दो असर